Bit By Bit - Kucherechedza maitiro - 2.3.2.6 Dirty
Big zvinyorwa date inogona dzakatakura zvinhu zvisingavaki muviri uye spam.
Vamwe vaongorori vanodavira kuti guru mashoko manyuko, kunyanya vaya vaibva paIndaneti manyuko, ndivo mumasango nokuti anounganidzwa kwaita. Kutaura zvazviri, vanhu vane vakashanda pamwe guru mashoko manyuko vanoziva kuti ivo kakawanda tsvina. Ndiko, vanowanzonzwa zvinosanganisira mashoko kuti urege kuratidza zviito zvechokwadi ichifarirwa nevaongorori. Masayendisiti akawanda evanhu vari kare kujairana muitiro rokuchenesa huru dzinotambudza munzanga ongororo data, asi kuchenesa hombe mashoko matsime ari kuoma nokuda kwezvikonzero zviviri: 1) havana zvokuumbwa vatsvakurudzi kuti vatsvakurudzi uye 2) Vanotsvakurudza kazhinji vane zvishoma kunzwisisa sei zvikasikwa.
Ngozi tsvina digitaalinen zvisaririra Data vari nezvakataurwa Back uye nevamwe ' (2010) Kudzidza mupfungwa achipindura musi waSeptember 11, 2001. Vanotsvakurudza yemanyorero kudzidza mhinduro zviitiko vachishandisa retrospective Data yaunganidzwa pamusoro kwemwedzi kana kuti kunyange kwemakore. Asi, Back uye nevamwe vakawana imwe nguva-pamusoro kunobva digitaalinen zvisaririra-ari timestamped, kwaita yakanyorwa mashoko 85,000 American pagers-uye izvi zvakaita vaongorori kudzidza zvavanoita zvikuru kwazvo timescale. Back uye nevamwe zvakasikwa paminiti-ne-miniti mupfungwa yekufamba kwenguva September rechi11 kuburikidza Coding mupfungwa zviri pager mashoko kuburikidza chikamu mashoko chokuita (1) kusuruvara (semuna, vachidanidzira, kurwadziwa), (2) kufunganya (semuna, kushushikana, unotya), uye (3) hasha (semuna, ruvengo, kutsoropodza). Vakawana kuti kusuruvara uye kufunganya-chinja nokufamba rose zuva pasina muenzaniso simba, asi kuti paiva unoshamisa kuwedzera pakutsamwa yose zuva. tsvakurudzo iyi sokuti zvinoshamisa mufananidzo simba nguva dzose-pamusoro date manyuko: kushandisa mureza nzira hwaizodai kuva akadaro mukuru-chisarudzo yekufamba kwenguva pfupi mhinduro kuti chiitiko chisingatarisirwi.
Zvisinei, gare gare imwe chete gore, Cynthia Pury (2011) akatarira Data vakachenjerera. Akaona kuti vakawanda vari inonzi akatsamwa mashoko akanga kunotangira chete pager uye vakanga zvose kufanana. Pano ndizvo iwayo mashoko inonzi akatsamwa akati:
"Reboot NT muchina [zita] muna kabhineti [zita] panguva [nzvimbo]: dzinonetsa: [zuva uye nguva]"
Mashoko aya akanyorwa akatsamwa nokuti yaisanganisira shoko "dzinonetsa", izvo zvinogona kazhinji anoratidza hasha asi haaiti panyaya iyi. Kubvisa mashoko kunotangira kuroora zvoga pager ichi anobvisa chose dziwedzere hasha pamusoro weboka zuva (Figure 2.2). Nemamwe mashoko, huru kwakaguma Back, Küfner, and Egloff (2010) aiva bhokisi mumwe pager. Sezvinoratidzwa nomuenzaniso uyu unoratidza, husina kuongorora nekaupenyu kunzwisisa uye sviba Data ane mukana kuenda chakakanganisika.
Akasabvumirana 2.2: Estimated nezvemaitiro hasha pamusoro weboka September 11, 2001 yakavakirwa pagers 85,000 American (Back, Küfner, and Egloff 2010; Pury 2011; Back, Küfner, and Egloff 2011) . Pakutanga, Back, Küfner, and Egloff (2010) yakashuma muenzaniso kuwedzera hasha zuva rose. Zvisinei, vakawanda pachena mashoko aya vakatsamwa vakanga kunotangira rimwe pager kuti kakawanda akatuma shoko zvinotevera: "Reboot NT muchina [zita] muna kabhineti [zita] panguva [nzvimbo]: dzinonetsa: [zuva uye nguva]". With shoko akabvisa, dziwedzere hasha nokupera (Pury 2011; Back, Küfner, and Egloff 2011) . Nhamba iyi ndiyo kubereka vana Pomuonde 1b muna Pury (2011) .
Nepo mashoko tsvina kuti akasika nokusaziva-dzakadai kubva imwe ruzha pager-kunogona kuonekwa kuburikidza zvine kungwarira mutsvakurudzi, pane hurongwa paIndaneti zvinokwezva chiziva spammers. spammers izvi vanobishairira chamutsa nyepera data, uye-kazhinji zvichikonzerwa purofiti-basa rakaoma chaizvo kuchengeta spamming yavo yakavanzwa. Somuenzaniso, basa enyika musi Twitter sokuti kusanganisira vamwe zvine yakagozha spam, apo vamwe zvinokonzera enyika vari nemaune akaita kutarira yakakurumbira kupfuura ivo chaizvoizvo vari (Ratkiewicz et al. 2011) . Vatsvakurudzi kushanda date kuti ingasanganisira kwakaunzwa spam kuramba uchapupu vateereri vavo kuti havana kuona uye akabvisa akakodzera spam.
Pakupedzisira, chii runoonekwa mashoko tsvina inogona kuvimba nenzira dzisiri pachena yenyu mibvunzo tsvakurudzo. Somuenzaniso, vakawanda dze zvigadziriso kuna Wikipedia nokusikwa naMwari zvoga bots (Geiger 2014) . Kana uri kufarira ikoroji pamusoro Wikipedia, ipapo bots izvi dzinokosha. Asi, kana iwe uri kuziva kuti vanhu kubatsira Wikipedia, dze zvigadziriso izvi zvinoitwa bots izvi zvinofanira dziripowo.
The yenzira kudzivisa kunyengedzwa mashoko tsvina ndivo kunzwisisa sei mashoko enyu vakasikwa kuita nyore exploratory pachisara zvakadai sokuridza nyore paradzira runofarira.